April 4, 2021 - समृद्ध नेपाल
जब एक महिला आफ्ना छोराछोरी सहित देह त्याग गर्ने अनुमति माग्न राष्ट्रपतिकहाँ पुगेपछी !
एक महिला यति जाजित भइन् की राष्ट्रपति समक्ष मृ त्यु वरण गर्ने अनुमति माग्न पुगेकी छन् । यो घटना भारतको राजस्थानको हो । उनी राष्ट्रपति समक्ष यस्तो माग लिएर पुगेकी हुन् । आफ्ना सन्तान सहित उनी संसारवाटै विदा हुन चाहन्छिन् । जसको अनुमतिका लागि उनी राष्टपतिलाई निवेदन दिन पुगेकी हुन् । उनका तीन सन्तान छन्
विप्लव द्वारा २ दिन नेपाल बन्दको घोषणा !
विप्लव द्वारा २ दिन नेपाल बन्दको घोषणा नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) नेपाल कम्निस्ट पार्टीका नेता हुन् उनी केही समय भूमिगत थिए। ऐले उनी खुल्ला राजनीतिमा आएको छन् एका एक सरकारले सहमति विपरित आफनो कार्यकर्ता पक्राउ गरेको भन्दै उनले पुन नेपाल बन्दको घोषणा गरेका छन् यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
हुवालिएन – ताइवानको इतिहासमै शुक्रबारको सर्वाधिक भयानक रेल दुर्घटनाबाट कम्तीमा ५० जनाको मृत्यु भएपछि देशभर शनिबार शो’क मनाइएको छ । मृतकहरुको सम्झनामा देशभर शनिबार राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको छ ।खोज तथा उद्धार टोलीहरु रेलका क्षतिग्रस्त डब्बाहरु बाहिर निकाल्न जुटेका छन् । अधिकारीहरुले शुक्रबारको रेल दु’र्घटना एउटा मर्मतका लागि प्रयोग गरिएको ट्रक चिप्लिएर रेलको लिकमा खसेपछि
बुद्धको पाईला जसले सेयर गर्छ उसलाई ७ दिन भित्रै निकै ठूलो खुसीको खबर प्राप्त हुनेछ !
बुद्धको पाईला जसले सेयर गर्छ उसलाई ७दिन भित्रै निकै ठूलो खुसीको खबर प्राप्त हुनेछ ! साथ साथै धन लाभको सुरुवात हुनेछ! मात्र ॐ लेख्नुहोस् !अनी सेयर गर्नुहोस मनोकामना पुरा हुनेछ जन्म दिन कसरि मनाउने रु आफ्नी आमालाई ढोग्ने अरुकी आमालाई नमस्कारगर्ने हाम्रो संस्किर्ती हो । आमालाई पहिलोसम्मान दिनु हिन्दु धर्मको बिशेषता हो । आमा बन्नजिम्मेवारी
प्रेमिका बिरामी भएपछि नायक पल शाह आत्तिएर दौडिँदै अस्पताल पुगे,
प्रेमिका बिरामी भएपछि नायक पल शाह आत्तिएर दौडिँदै अस्पताल पुगे आखिर के भयो गरिमालाई ? पलले समेच रुन्चे अनुहार लगाउँदै गरिमाले भेटे, कहिले डिस्चार्ज हुन्छिन् गरिमा ?गायिका बेनिशा पौडेल गायक सुरेश लामा रचना सरोज ओली को पर्दैन पर्दैन मलाई फकाउन” वोलको गित सार्वजनिक भएको छ । गीतमा नायक पल शाह र मोडेल गरिमा शर्माले वैवाहिक
नेपालमै पहिलोपटक ‘रोबटबाट न्युरो सर्जरी’ गर्ने केएमसी अस्पतालको तयारी !
सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)ले रोबटिक सर्जरी थाल्ने भएको छ। उसले यो प्रविधि नेपालमै पहिलोपटक भित्र्याइएको दाबी गरेकोछ।रोबट मेसिन’ ल्याएर ‘रोबटिक सर्जरी थाल्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको केएमसीले जनाएको छ। रोबटिक सर्जरीका लागि केएमसीले करिब १० करोडको लागतमा मेसिन खरिद गरिएको दाबी गरेको छ। तर यो उपकरण भने केएमसीले काठमाडौं ल्याइसकेको छैन। मेसिन आउने क्रममा
सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाले अध्यक्षको निधनमा पाँच दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।अध्यक्ष नवल सिंह रावलको आज ७७ वर्षको उमेरमा मष्ति८ष्कघा’तका कारण नि८धन भएको हो ।गाउँपालिकाका सातैवटा वडामा भोलिदेखि पाँच दिनसम्मका लागि सार्वजनिक बिदा दिइएको छ ।अध्यक्षको नि८धनको शो८क मनाउनका लागि गाउँपालिकाले पाँच दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको उक्त गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
मान्नुहोस् तपाइँको बैंक खातामा दुई हजार रुपैयाँ पनि छैन तर अचानक तपाइँलाई थाहा हुन्छ कि तपाँईको खातामा १६करोड भन्दा धेरै रुपैयाँ जम्मा भएको खबर आउँछ खातामा दुई हजार पनि नभएको तपाँईको खातामा अचानक १६करोड भन्दा धेरै रकम आयो भने सोच्नुहोस् तपाइँको अवस्था कस्तो होला ? यदि तपाईंले चिठ्ठा मार्फत त्यो पैसा पाउनुभएको छ भने तपाईं
मायाको अगाडी केहि लाग्दैन भने झैँ यी हजुर बुबा र नातिनी जस्तो देखिने जोडी एका एक भाईरल बने !
सामाजिक सञ्जालमा आजभोली अनौठो लाग्ने घटना सार्वजनिक हुन्छन् । अस्वभाविक लाग्ने वैवाहिक जोडीको अनौठो कहानीलाई मनोरञ्जनका रुपमा प्रस्तुत गरिएका हुन्छन् । तर उनीहरुको भित्रि पी डा भने देखाइदैन । सामाजिक सञ्जालमा भ्युज पाउन अस्वभाविक देखिने कुरालाई नै रोमान्टिक पारामा प्रस्तुत गरिएको हुनछ । तर उनीहरुले त्यस्तो अस्वभाविक निर्णय किन लिए ? त्यसको पछाडीको कारण के
विबाहित पुरुषसँग प्रेममा लोकप्रिय मोडल अञ्जली अधिकारी !
विबाहित पुरुषसँग प्रेममा लोकप्रिय मोडल अञ्जली अधिकारी ! विबाहित पुरुषसँग प्रेममा लोकप्रिय मोडल अञ्जली अधिकारी काठमाडौँ । गायक दिनेश थापा गायिका भावना आचार्य र गायिका कामना ओलीको स्वर रहेको हत्ते नहाल बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । पुरुसोत्तम सुवेदीको एरेन्ज, दीपक शर्माको शब्द संगीतमा तयार भएको गीतमा अञ्जली अधिकारी र गायक दिनेशको अभिनय रहेको